ESI EGWU TUNNGLE - TUNNGLE - 2019
Ụzọ aghụghọ nke egwuregwu site na Tunngle
Na-arụ ọrụ na HDD na SSD chọrọ otu setịpụrụ ngwaọrụ dị mkpa maka mmejuputa otu ọrụ. Ihe dị mma na nke ahụ bụ Disk Partition Expert software si Macrorit mmepe. Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịmepụta akụkụ, chọpụta ha maka njehie, ma nyochaa ụgbọala ahụ iji chọọ ebe ọjọọ. Banyere ndị a na ihe ndị ọzọ ma a ga-atụle ya n'ihu.
A na-etinye ihe ndị e kere eke n'ụzọ dị ka onye ọrụ ahụ ga-ahụ ọrụ ọ bụla dị na mmemme ahụ. Nchịkọta na egosiputa taabụ atọ, nke "General" Ọ na-enye ọrụ iji chekwaa ọrụ niile onye ọrụ ahụ mere, ma ọ bụ kpochapụ ha. Na nke abụọ taabụ "Lee" Ịnwere ike ịhazi njirimara nke ngwaọrụ na interface - wepu ma ọ bụ tinye ihe dị mkpa. Tab "Ọrụ" egosi ọrụ na nkewa na diski. A na-egosikwa ha na menu aka ekpe.
Disk na nkebi data
Enwere ike ịchọta ihe ọmụma gbasara ụgbọala na ngalaba ya na mpaghara nke usoro ihe omume ahụ, bụ nke e kewara abụọ. Nke mbụ na-egosiputa data na draịva ziri ezi na tebụl. Gosipụtara: ụdị nkebi, ụda olu, nke nwere ohere, yana ọnọdụ ya. N'akụkụ nke abụọ nke windo, ị ga-ahụ otu ozi nkebi ahụ n'ụdị nke eserese, nke a na-etinye na nke ọ bụla n'ime HDDs / SSDs.
Iji lelee ozi gbasara HDD ma ọ bụ SSD, nke esiri arụ ọrụ OS, ị ga-ahọrọ ọnụọgụ dị na aka ekpe "Njirimara Anya". Ọ na-egosipụta data zuru ezu na steeti ụgbọala ahụ, ya bụ ọrụ ya. Tụkwasị na nke ahụ, a na-enye ozi na ụyọkọ, ndị ọrụ, usoro faịlụ na nọmba nsonye nke diski ike.
Nnwale ule n'elu
Ọrụ ahụ na-enye gị ohere ịlele diski ike maka njehie ma chọpụta ndị na-adịghị arụ ọrụ. Tupu ịrụ ọrụ ahụ, ịnwere ike ịme ntọala, dịka ọmụmaatụ, tinye ego ego nke ohere diski. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ HDD zuru ezu, ịnwere ike ịhọrọ nhọrọ iji gbanyụọ PC mgbe arụ ọrụ gasịchara. Pango n'elu gosiri nkọwa zuru ezu banyere ọrụ a rụrụ: oge ​​nyocha, njehie, ohere nchekwa, na ndị ọzọ.
Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịmepụta ma ọ bụ gbasaa nkewa n'ihi ezinyere ohere disk. Ọrụ a bụ nke mbụ na ndepụta nke ngwaọrụ aka ekpe - "Gbanwee / Bugharịa Mpịakọta". Enwere ike gbanwee ntọala niile na aka, gụnyere itinye mkpụrụedemede a na-ejighi ya.
"Lelee Mpịakọta" - ọrụ nlele nke diski mpaghara, nke na-enye gị ohere ịlele ya maka njehie. Mgbe ụfọdụ maka ịnwale HDD ọ dịghị mkpa ka ịlele ya kpamkpam, ma ọ bụ naanị usoro nke ya. Nlele ahụ na-enyere aka ịchọpụta ngalaba ntụpọ na ngalaba nke onye ọrụ ahụ họpụtara. Ị nwere ike ịhazi ọkachamara ule maka ọnụnọ nke emezila njehie na mpaghara ebe ọkwọ ụgbọala.
Mgbanwe usoro faịlụ
Ọrụ nke ịgbanwe usoro faịlụ dị ugbu a gaa na nke ọzọ na-enye gị ohere ịgbanwe ụdị ya site na FAT ka NTFS ma ọ bụ vice. Iji rụzuo ọrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu, a gwara ndị mmepe ka ha mee ka ndabere ndabere nke faịlụ nkewa ka a gbanwee. I kwesịkwara ime ka nchekwa nchekwa hụ ma kpochapụ faịlụ site na ebe nchekwa.
Inye ntinye aka nke usoro nke oru;
Enweghi ihe di elu nke ozo iji na-arụ ọrụ na draịva;
Ọnụnọ nke ọrụ mmemme bụ ngwaọrụ ndị dị na Windows;
Ntugharị Bekee zuru oke.
Ndị ọkachamara nke Ọchịchị Disk Macrorit ga-ekwe ka ị hazie draịvụ ike gị iji rụọ ọrụ nke ọma na ya. Ọrụ dị iche iche na ngalaba na njikarịcha ha dị site na ikikere n'efu. Ihe ngwọta a nwere ike ịkpọ usoro ihe dị mfe na ngwaọrụ ndị dị mkpa, ma ọ bụghị ọkachamara. Ya mere, tupu ị na-eji ndị ọkachamara Partition Diski, ị ka dị mkpa iji kpebie ihe mgbaru ọsọ a na-achụ maka iji ya.
Nbudata ndi okachamara ihe omuma nke Macrorit
AOMEI onye isi aka Ngwaọrụ Nchekwa Diski HP USB Manawa Disk Manager Ihe nzuzo anwansi
Ọkachamara Ọfịs Disk bụ ngwọta ngwanrọ dị mfe ma dị mfe maka ịrụ ọrụ na diski siri ike na draịvụ siri ike.
System: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Onye Mmepụta: Macrorit
https://termotools.com ig.termotools.com © Tunngle 2019